IQOption - ukungena ngemvume, ubhalise, amathiphu & umagazini izindaba for iqoption.com abathengisi
Vula i-akhawunti ye-IQOption / ukungena ngemvume
Imali yakho enkulu ingaba sengcupheni
Ukuhlaziywa Kwesikhathi Sangempela
Uhlelo Lokuxhumana Izindaba
Inhlokodolobha yakho isengcupheni. Izinketho ze-Binary ne-Digital azivunyelwe ku-EU.
Njengoba kudingwa yi-European Securities and Markets Authority (ESMA), ukuhweba okukhethwa kukho kanambambili nedijithali kutholakala kuphela kumakhasimende afaneleke njengongoti.
$ 1 Isivumelwano Esincane
$ 10 Idiphozi Engaphansi
Hlola idemo yamahhala nge $ 10,000
Isexwayiso sobungozi: imali yakho enkulu ingaba sengcupheni
Umthengisi we-IQ Option unengxenye yezindaba nemfundo ewusizo kakhulu. Bhalisa bese ungena ngemvume ku-traderoom ukuyihlola.
Cards Amakhadi edebithi namakhredithi support ukwesekwa okungama-24/7 app Uhlelo lokusebenza lwe-cross-platform 🪙 ​​ngokuchofoza okukodwa thenga i-crypto oker Umthengisi onelayisense
Bona zonke Izinzuzo ze-IQ Option
IQINISO LOKUKHETHA UMAHHALA WE-IQ Option - we IQ option Abahwebi Bamasheya.
Lena IQ option ingosi yokuhweba ngamathiphu nezindaba.
IQ option ukuhweba ngama broker - irejista | Umagazini wezindaba we-IQ - ifaq, amavidiyo, amathuluzi wokuhweba namathiphu wokuhambisana
Amathiphu wokuhweba nezindaba zabathengisi be- iqoption.com kanye nabaxhumana nabo | Ngena ngemvume
Ipulatifomu Yokuhweba eku-inthanethi - ukubuyekezwa kwe- IQoption (Owayekade enguBinary Options Broker)
Ipulatifomu uqobo lwayo lube nezinguquko eziningi kusukela ngonyaka we-2014, kanti i-IQoption ihlala isebenza kanzima ukwenza ngcono ukusebenza kwayo futhi iqinisekise ukuthi iyashesha, inembile futhi kulula ukuyisebenzisa. Ipulatifomu ye-IQ Option inezinzuzo eziningi nezinsizakusebenza zokufunda.
Ama-cryptocurrensets, i-Forex kanye nezinketho (Izinketho kanambambili nezinketho zedijithali) ama-CFD kumasheya, ama-ETFs, impahla
IQOption yasungulwa ngo 2014. Great service professional, isipiliyoni esiyingqayizivele wabenza phezu wabathengi ethandwa kakhulu. Ngokushesha baba elinye lamapulatifomu akhula ngokushesha emhlabeni wezohwebo. Kuze kube manje, i-IQOption isihlanganise izigidi zabahwebi, ngokubhalisa okuningi nsuku zonke! I-IQOption isanda kukhulisa ukunikela kwayo, futhi amaklayenti ayo manje angathengisa ama-CFD kumasheya nakuma-ETFs, ukuhweba nge-Forex futhi afinyelele umkhiqizo okhethekile we-IQOption obizwa ngokuthi Izinketho zedijithali nezinketho kanambambili ezitholakala kuphela ku- Amaklayenti ochwepheshe. Ngaphezu kokuthuthuka kwepulatifomu, i-IQoption yethule uhla lwemikhiqizo emisha emihle ngoba i-IQoption izimisele ukuhlinzeka bonke abathengisi ngolwazi lokugcina online lokuhweba. Amaklayenti e-IQoption angazibandakanya nama-CFD aku-inthanethi ngazimbili zemali, ama-CFD kumasheya, ama-CFD kwimpahla, ama-CFD kuma-cryptocurrensets, ama-CFD kuma-ETFs, kanye nama-Cryptocurrensets afana neBitcoin, Litecoin (nokunye okuningi) kanye Nezinketho (Izinketho kanambambili nezinketho zedijithali kutholakala kuphela kumaKlayenti Ochwepheshe). Amaklayenti ochwepheshe angahlukanisa iphothifoliyo yabo yokutshala imali kule nqubo.
Ungalindi. Bhalisa futhi uvule i-akhawunti ye-IQ Option manje. Ungavula futhi ifayela le- i-akhawunti yedemo yamahhala. Kunconywa kakhulu ukuthi uzame ukwenza i-akhawunti kuqala. Ungangena ngemvume ku-akhawunti yedemo ye-IQ Option mahhala.
Ukubuka konke kwe-IQOPTION - ipulatifomu yokuhweba kusukela ngo-2014
Idiphozi encane: $ 10
Ukuhweba okuncane: $ 1
Izinketho ze-Binary Return: kufika kuma-95% uma kwenzeka ukubikezela okulungile (noma ukuhweba ngempumelelo) - akutholakali e-EU.
Izindlela zokufaka / zokukhipha: Ikhadi lesikweletu, Ukudluliswa Kwentambo, iSkrill, iNeteller, iBoleto, iQiwi, iWebMoney, iCashU, iDeal, iFasapay,
Amafa: ngababili bezimali, amasheya, ama-indices, izimpahla
Amazwe: IQoption yamukela wonke amazwe ngaphandle kweCanada, Japan, Russia, USA, Turkey, Israel, Syria, Sudan, Australia ne-Iran. Abasebenzisi abavela emazweni alandelayo abakwazi ukuhweba kusuka kuhlelo lokusebenza leselula le-iOS: Malta; Uhlelo lokusebenza lwe-Android alutholakali eMalta, eMyanmar, eLiechtenstein, eCuba. (Ukuthola uhlu lwamanje lwamazwe amukelwe / angavumelekile vakashela iwebhusayithi esemthethweni ye-iqoption)
I-akhawunti yedemo: Yebo, ngena ngemvume mahhala
Uhlelo lokusebenza lweselula: i-Android, i-iOS
Ipulatifomu Yokuhweba: isiphequluli sewebhu, uhlelo lokusebenza oluzimele
Izilimi Zokusekela: IsiNgisi, isiRashiya, isiTurkey, isiJalimane, iSpanishi, isiPutukezi, isiShayina, isiSweden, isiKorea, isiFulentshi, isiNtaliyane, isi-Arabhu, isi-Indonesian
Ukuhoxiswa: usuku olungu-1 lokusebenza
Izibonelo zezizwe ezisekelwayo (noma amazwe avumelekile ukuthi ungangena ngemvume ku-IQOptions).
Ngubani ongabhalisa futhi angene ngemvume ku-IQ Option (amazwe)?:
Izakhamizi zamazwe alandelayo zingakujabulela ukuhweba nge-IQ Option: Izizwe zaseYurophu ezinjengeJalimane, iFrance, iSpain, i-UK (okwamanje ayitholakali ukubhalisa ngemuva kweBrexit) iNetherlands (ukulinganiselwa), iPortugal (ukulinganiselwa), iSweden, iSwitzerland, iGrisi, I-Italy, i-Iceland, njalonjalo…
Amanye amazwe angewona e-EU aqukethe iNingizimu Afrika, iSouth Korea, iBrazil, i-Argentina, iCosta Rica, iDominican Republic, iMexico, iNewZealand, iThailand, iPeru, iChile, iColombia, iVenezuela, iSaudi Arabia, iTaiwan, njalo njalo.
Uyini umehluko we-IQ Option broker phakathi kwamazwe we-EU namazwe angewona awe-EU:
I-IQ Option Europe Ltd. ilawulwa yi-ESMA, futhi amakhasimende e-iqoptions ahlala e-EU angaleso sizathu asuselwa kuzinqubomgomo nezimo zokuhweba ze-ESMA. Isizathu ukuthi e-EU (European Union), ukuhweba nge-inthanethi kulawulwa yi-ESMA (i-European Securities and Markets Authority).
Yimaphi amazwe ukuvinjelwa kokuhweba okukhethwa kukho kanambambili?
I-ESMA empeleni inqande izinketho zedijithali nezinketho kanambambili. Lokhu kukhombisa ukuthi abadayisi be-iqoptions abavela e-EU (ngaphandle kwabadayisi abangochwepheshe be-EU) abanakho ukufinyelela kulezi zinsimbi. Laba badayisi bangathengisa izinketho ze-FX nge-IQ Option ngenxa yokuthi kuvunyelwe yi-ESMA.
Ngakho-ke isibonelo samazwe lapho Izinketho ze-Binary ne-Digital Zivinjelwe khona:
Izibonelo zamazwe lapho izinketho kanambambili nezedijithali zenqatshelwe khona, yiJalimane, iFrance, i-Austria, iBelgium, i-Estonia, iBulgaria, iCroatia, iCyprus, iNetherlands, iCzech Republic, iDenmark, i-Italy, iFinland, iGreece, iHungary, i-Ireland, iLatvia, iLithuania, iLuxembourg , IMalta, iPoland, iPortugal, iRomania, iSlovenia, iSpain, iSweden neSlovakia.
I-ESMA nayo ikhawulele umthamo wesilinganiso otholakala kalula kubathengisi be-EU abathengisa. Abahwebi abavela ngaphandle kwe-EU bangasebenzisa ekuthengiseni amandla amakhulu kakhulu kunabathengisi abavela e-EU. Vele, kukhona ingozi enkulu futhi.
Ungalindi. Bhalisa bese uvula i-akhawunti manje. Ungakwazi ngena ngemvume ku-IQ Option lapha.
Sizama ukugcina le webhusayithi ivuselelwe kepha ukuthola imininingwane eminingi esesikhathini njalo vakashela iwebhusayithi esemthethweni. Imininingwane engenhla ingahle iphelelwe yisikhathi.
Kuphephile ukuhweba nomthengisi we-IQ Option? Uthini owakho umbono?
Izindatshana ze-IQ Option
Uhlu lwezizathu zokuthi kungani i-IQ Option broker iphephile futhi inokwethenjelwa. Amanxusa abelana ngemibono yawo IQ Option inokwethenjelwa ngoba… license Ilayisense etholwe kwaCySEC eYurophu inyusa ukuthembeka komthengisi futhi ikhombisa ukuthi isebenza ngendlela esemthethweni. Are Kukhona ...
Thola amaqhinga wokumaketha ukuze unakekele umsebenzisi
Abasebenzisi be-Intanethi babona ukunikezwa kokukhangisa okungaba ngu-5,000 XNUMX nsuku zonke. Ungabenza kanjani banake okwakho futhi, nangaphezulu, ubenze amaklayenti? Ukuba nokuqukethwe okuhle akusho ukuthi abantu bazocofa kuzixhumanisi zakho ezihambisanayo. Nanka amanye amaqhinga wokumaketha ...
Kungani i-akhawunti yami ye-IQOption ivinjiwe / imisiwe futhi angikwazi ukungena ngemvume
I-IQoption FAQ, Okufakiwe, Izindaba ze-IQoption nezeluleko
Kunezizathu zokuthi kungani i-akhawunti yakho ye-IQ Option ivinjelwe. Okufanele ngikwenze? Ungabi novalo. Uma ibimisiwe futhi awukwazi ukungena ngemvume kwabosizo lokuqala. Isimemezelo esidumile esihloliwe ngabahwebi bethu ezinkundleni zokuxhumana eziku-inthanethi sithi: Angikwazi ukungena ngemvume ku-akhawunti yami - i-akhawunti ine ...
Imibono emi-4 yokuthi ungakunciphisa kanjani ukulahleka futhi ukwandise ukuguqulwa
Izindaba Zokuxhumana Namathiphu, Ukukhulisa ukumaketha
I-Intanethi ihamba kancane ohlangothini lwabasebenzisi? Iwebhusayithi yakho ingahle ibe nephutha ngokuphelele, kepha kusizani ukuthi uma abasebenzisi bakho abangahle bangakwazisi ngenxa ye-Intanethi ehamba kancane? Awukwazi ukusheshisa ukuxhumana kwabo, kepha ungalungiselela iwebhusayithi yakho ukuthi isebenze ngokushesha! Lapha...
Izindlela ezi-5 zokuthengisa ezihambisanayo eziku-inthanethi ezizolandelwa ngo-2021
Ukukhulisa ukumaketha, Izindaba Zokuxhumana Namathiphu
Amathrendi nemibono eza futhi ahambe ngokushesha okukhulu ekumaketheni kwedijithali - wazi kanjani ukuthi uzonamathela futhi udedele ini? Ithimba elihambisana ne-IQ Option lenze uhlu lwamasu afanele abazomaketha kuwo wonke umhlaba abazowasebenzisa ngo-2021. Yimuphi ongamvumela? 10X ...
Umkhawulo wethrafikhi waseCzech ku-IQOption
Izindaba Zokuxhumana Namathiphu
Inketho ye-IQ yokuyeka ukwamukela abathengisi abasha abavela eCzech Republic. Njengomunye ugesi umzamo wakho wokuhambisana namanye amazwe. Ezinyangeni ezimbalwa emuva, i-IQ Option ikutshele ukuthi ngenxa yezidingo zomthetho i-IQ Option ivunyelwe ukuhlinzeka ngezinsizakalo kubahlali ...
Izindawo zokuhlola ukuqala kabusha umsebenzi wokuhambisana ne-IQOption
Izindawo zokuhlola ezi-3 zokuqalisa kabusha umsebenzi wakho wokuhambisana ne-IQ Option ngemuva kwamaholide. Sithemba ukuthi ube nesikhathi esihle samaholide! Ukulungele ukubuyela emsebenzini ngamandla amasha? Nalu uhlu lokuhlola olusheshayo lokuqala okusha konyaka omusha we-2021 noma yimuphi unyaka :-) Bheka okuphezulu ...
Spanish komkhawulo on IQOption
Uhlaka lwezomthetho lwaseSpain luvimbela izinkampani ukuthi zingabandakanyi abaxhumana nabo ekukhuthazeni izinsizakalo zezezimali kubahlali baseSpain Ngokolwazi olutholwe kumlawuli wezezimali waseSpain i-CNMV, uhlaka lwabo lwezomthetho luvimbela izinkampani ezivela ...
Impumelelo ye-IQOption ngo-2020.
Usale kahle, 2020! Masikhumbule okuhle kuphela kwayo ngo-2020 shazi - izizathu ezi-6 zokuziqhenya ngalesi sikhathi samaholide. Izinyanga eziyi-12 ezedlule zikhumbuze i-IQ Option ukuthi kubaluleke kangakanani ukuhlangana ngenhloso enkulu, sisizane, futhi nibe nobuciko. Ngenxa yomthelela wakho, Inketho ye-IQ ...
Umkhawulo we-Traffic wase-UK ngenxa yeBrexit
Ngenxa yokuthi i-UK ishiye i-European Union ne-EEA, i-IQ Option ngeke isakwazi ukwamukela abahwebi abavela e-UK. Ngenxa yokuthi i-UK ishiye i-European Union ne-EEA, ukulawulwa kwezezimali emakethe yase-UK kuba yiso kuphela isibopho seziphathimandla zendawo ....
Uhlelo lokusebenza lwe-IQBroker iOS lwethrafikhi entsha
Enye indlela ye-IQOption ye-iOS yamazwe angalawulwa uhlelo olusha lwe-IQBroker iOS lwabasebenzisi abasha abavela emazweni angalawulwa. Zonke izithuthi ezihambisanayo zidinga ukuqondiswa kuhlelo lokusebenza lwe-IQ Option oluhlukile lwe-IQ Broker iOS lwabasebenzisi abasha abavela emazweni angalawulwa. Sicela ube ...
Amaholide emhlabeni wonke
Imikhosi, amashejuli, namathiphu wokuphromotha eLatin America naseYurophu ngoKhisimusi eLatin America Izithameli zakho zigubha kanjani amaholidi asebusika - futhi ingabe zenzeka ngempela? Sizobukeza amasiko kaKhisimusi noNyaka Omusha we-IQ Option yakamuva enza kahle kakhulu .. .
Ukubhida ngomkhiqizo: uhlu olusha lwamagama angukhiye angemuhle
Ukubhida ngomkhiqizo: uhlu olusha lwamagama angukhiye amabi guide Umhlahlandlela wesinyathelo ngezinyathelo (i-PDF) - ungalusetha kanjani uhlu lwamagama angukhiye angemuhle ku-Google Adwords Kubuyekezwe kusukela ngoJanuwari 2021: Uhlu lwamagama angukhiye amabi azofakwa emikhankasweni yezikhangiso yokuqukethwe ekukhangiseni kosesho izinsizakalo bezilokhu ...
Ikhalenda Yezomnotho - Imicimbi Ebalulekile
Isifinyezo Sesikhathi Sangempela Sobuchwepheshe
ISEXWAYISO SOKUTSHALWA KWENGOZI EPHAKEME:
Izinketho kanambambili nezidijithali azikhuthazwa noma zithengiselwe abathengisi abangaqeqeshiwe abavela e-European Union. Uma ungelona iklayenti eliqeqeshiwe, sicela ushiye leli khasi.
Ama-CFD amathuluzi ayinkimbinkimbi futhi eza nengozi enkulu yokulahlekelwa yimali ngokushesha ngenxa yokusebenzisa amandla. Phakathi kwama-akhawunti wabatshalizimali abathengisa abalahlekelwa yimali uma bethengisa ama-CFD. Kufanele ucabangele ukuthi uyayiqonda yini indlela ama-CFD asebenza ngayo nokuthi uyakwazi yini ukubeka engcupheni enkulu yokulahlekelwa yimali yakho.
Sicela waziswe ukuthi imikhiqizo ethile kanye / noma amazinga wokuphindaphinda kungenzeka angatholakali kubahwebi abavela emazweni e-EEA ngenxa yemikhawulo yezomthetho.
Njengoba kudingwa yi-European Securities and Markets Authority (ESMA), ukuhweba okukhethwa kukho kanambambili nedijithali kutholakala kuphela kumakhasimende afanelekayo njengamakhasimende achwepheshe.
Izinto zokwazisa kule webhusayithi zingu-18 + kuphela. Sicela ukuhweba / ukugembula ngokuzibophezela.
Amakhukhi Nenqubomgomo Yobumfihlo
Uhlelo Lokusebenzisana ne-IQOption
Imininingwane yokuxhumana esemthethweni ye-IQ Option:
I-imeyili yokusekela: [i-imeyili ivikelwe]
Izinkinga zokufaka: [i-imeyili ivikelwe]
Ongakhetha kanambambili Wabasaqalayo
I-IQ OPTION - I-Forex - umthengisi we-forex onconyiwe
Isicelo se-IQ Option ku-Apple Store naku-Google Play Isitolo
I-akhawunti yedemo yenketho ye-IQ | Ngena ngemvume
Iphutha lokukhetha i-IQ - 404, 2503
Uhlelo lokuhambisana kwe-IQOption, bhalisa, isabelo semali, ikhomishini ye-CPA, ukungena ngemvume
IQOption FAQ - izimpendulo zemibuzo ejwayelekile
IQOption Robot - isistimu yesoftware ezenzakalelayo ye-IQ-Bot
Vula i-akhawunti ye-demo
Vula ukubhaliswa kwe-akhawunti yedemo
Ibhokisi Elifingqiwe Lokuhlaziywa Kwesikhathi Sangempela
IQoptions.eu akuyona iwebhusayithi esemthethweni iqoption.com. Zonke izimpawu zokuhweba ezisetshenzisiwe zingeze- iqoption.com. IQOptions.eu iyiwebhusayithi esebenzisana nayo futhi iphromotha iqoption.com. Sithola ikhomishini lapho umhwebi ebhalisa ngezixhumanisi zethu.
Silwela ukuthi lonke ulwazi lube sesikhathini kodwa ukuthola okunikezwayo kwamanje hlola iwebhusayithi esemthethweni ye-IQ OPTION. Uma ungathanda ukuxhumana nomphathi wale webhusayithi sicela uthumele i-imeyili:[i-imeyili ivikelwe]
Ukuhumusha kwama-athikili okuzenzakalelayo
Lezi zihloko zingezesiNgisi. Uyacelwa ukuthi ushintshe ulimi uma izindatshana zokuhweba zingahunyushwa kahle. Zihunyushwa ngokuzenzakalela futhi kungenzeka zingakhombisi ngaso sonke isikhathi incazelo yokuqukethwe kwasekuqaleni.
Sisebenzisa amakhukhi ukuhlinzeka nokwenza ngcono izinsizakalo zethu. Ngokusebenzisa isayithi lethu, uyavuma amakhukhi. Ukuthola kabanzi sicela ufunde izinqubomgomo zethu ngezansi:
Imininingwane & Support
Cishe u-74-89% wama-akhawunti wabatshalizimali abathengisa alahlekelwa yimali lapho kuthengiswa ama-CFD nalaba bahlinzeki. Kufanele ucabangele ukuthi ungakwazi yini ukuthatha ubungozi obukhulu bokulahlekelwa yimali yakho.
Isexwayiso Sengozi Ejwayelekile: Izinsizakalo zezezimali ezikhangiswe kule webhusayithi zinezinga eliphakeme lobungozi futhi zingaholela ekulahlekelweni yizo zonke izimali zakho. Akufanele neze utshale imali ongeke ukwazi ukuyilahla.
iqoptions.eu akuyona iwebhusayithi esemthethweni iqoption.com.
Ngicela uqaphele: Izindatshana ezikule webhusayithi azizona izeluleko zokutshala imali. Ezinye zezixhumanisi eziseposini noma ekhasini elingenhla zingaba izixhumanisi ezihambisanayo. Lokhu kusho ukuthi uma uchofoza kusixhumanisi bese uthenga leyo nto, ngizothola ikhomishini yokubambisana.
© 2021 - IQ OPTION BROKER - hhayi esemthethweni | Izinto zokwazisa kule webhusayithi zingu-18 + kuphela. Sicela ukuhweba / ukugembula ngokuzibophezela.
Isexwayiso Sengozi Ejwayelekile: Izinsizakalo zezezimali ezikhangiswe kule webhusayithi zinezinga eliphakeme lobungozi futhi zingaholela ekulahlekelweni yizo zonke izimali zakho. Akufanele neze utshale imali ongeke ukwazi ukuyilahla
Cishe u-74-89% wama-akhawunti wabatshalizimali abathengisa alahlekelwa yimali lapho kuthengiswa ama-CFD nalaba bahlinzeki. Kufanele ucabangele ukuthi ungakwazi yini ukuthatha ubungozi obukhulu bokulahlekelwa yimali yakho. | Imininingwane © 2021 | Wonke Amalungelo Agodliwe
Inhlokodolobha yakho ingaba sengcupheni